Wariye Axmed Saleebaan Dhuxul Oo Maanta Xabsiga Laga Sii Daayay | Somaliland.Org
March 30, 2009	Hargaysa (Somaliland.org)- Wariye Axmed Saleebaan Dhuxul oo muddo sadex maalmood ah ku xidhnaa Saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maanta la sii daayey.
Wariye Dhuxul oo saaka Subaxnimadii hore xukuumadu geysay Maxkamada Gobolka Hargeysa ayaa waxa la sii daayey Galinkii danbe ee maanta ka dib markii Canbaareyn culus Xukuumada lagu jeediyey tacadiyada ka dhanka ah xoriyatul qowlka ee ay caadeysatay.
Wariyayaal ka kala socday saxaafada Madaxbanaan oo tiradoodu gaadhayso 70 ayaa saaka ka xaadirey Maxkamada la geeyey Dhuxul.
Wariyayaashu shir-jaraa’id oo ay ku qabteen Barxada Maxkamada, waxa ay ku cadeeyeen sida ay uga hor-jeedaan talaabooyinka cabudhinta iyo xadhiga ah ee lagu hayo suxufiyiinta madaxa banaan ee Somaliland.
Axmed Saleebaan Dhuxul oo ka mid ah Gudiga Fulinta ee ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja, Islamarkaana ka tirsan soo saarayaasha Radio Horyaal, maaha markii ugu horeysay ee sife ka dhan ah shuruucda iyo madaxbanaanida xoriyada hadalka loogu taxaabo xabsiga, hase ahaatee, waxa hore looga Eryay Idaacada dawladu maamusho ee Radio Hargeysa ka dib markii lagu eedeeyey in uu ka hadlay idaacada madaxbanaan ee Horyaal dhawr sano ka hor, wakhtigaas oo sidoo kale xabsiga loo taxaabay.